Guardiola oo ka hadlay dareenkiisa, kadib xasuuqii ba’anaa ay u geysteen kooxda Chelsea – Gool FM
(England) 11 Feb 2019. Macalinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa hoos u dhigay guushii weyneyd ay ka gaareen Chelsea, taasoo ahayd mid niyad jab ah isla markaana ay si weyn kaga naxeen taageerayaasha kooxda Blues.
Kooxda Manchester City ayaa xasuuq ba’an ugu geysatay dhigeeda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea, ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Premier League, kadib markii ay kaga adkaatay 6-0.
Isla markiiba ciyaarta kadib ayaa waxaa la arkayay muqaal ah in labada macalin ee Pep Guardiola iyo Maurizio Sarri aysan is gacan qaadin, inkastoo labadan nin midba midka kale ay dhoowr jeer sheegeen inay yihiin saaxiibo si aad ah isugu dhow.
Guardiola ayaa ciyaarta kadib wax laga weydiiyay sababta ay isku gacan qaadi waayeen Maurizio Sarri, marka uu kulanka soo idlaaday wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Waxaa jira is faham daro, isaga ma uusan i arkin”.
“Dadku ma fahmaan sida ay u adag tahay inaad ku ciyaarto qaab ciyaareedkan, labadeydii xili ciyaareed ugu horeysay ee halkan aad ayay iigu adkeyd”.
“Maurizio Sarri wuxuu haatan u baahan yahay saaxiibo si weyn ugu kalsooni qaba”.
“Isbuuc ka hor waxaan guuldaro kala kulanay Newcastle United, laakiin hadii aad fiiriso ciyaarta maanta, cadaadiska, boos qaadashada iyo dhaqaaqista waqtiga saxda ah ee weerarka iyo ka faa’iideysiga fursadaha gool dhalinta, waxa aan dhihi karo ciyaartoyda ayaa ah waad mahadsan tihiin, waxa aad ka sameyseen kulankan”.
“Waan ku faraxsanahay kooxdeyda, waxaan sugeynaa waxa Liverpool ay ka sameyn doonto kulanka ka dhici doono garoonka Old Trafford haddii ay garaacaan Man United, islamarkaas waxay ku soo laaban doonaan hogaanka horyaalka”.
“Laakiin inaan sii wadno loolalanka horyaalka Premier League, wareeg kasta, taasi waxay igaaga dhigan tahay wax badan”.
“Waxaan Qaladaad badan ku hor sameenay koox aan wax naxariis ah lahayn” - Maurizio Sarri